ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ လိုင်စင်တွေလျှောက်တဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းများ - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ လိုင်စင်တွေလျှောက်တဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းများ
13 Feb 2018 11:52 am တွင် တင်ခဲ့သည်
939 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ လိုင်စင်တွေလျှောက်ထားတဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကန်ထရိုက်လိုင်စင်လျှောက်ရာမှာ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံနဲ့အတူ ပါဝင်ရမဲ့အချက်တွေက နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ အမွေစားအမွေခံရဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ အိမ်ထောင်စုဇယား ပုံစံ(၆၆)မိတ္တူ၊ ဓာတ်ပုံ(လိုင်စင်)ရောင်စုံ(၄)ပုံ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားမရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်း သိန်း (၁၅၀၀)၊ လိုင်စင်ရ ကန်ထရိုက်တာတစ်ဦး ထောက်ခံချက်၊ အောင်လက်မှတ်၊ ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူတွေ ပါရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်လျှောက်ထားတဲ့အခါ လျှောက်လွှာပုံစံနဲ့အတူ ပါဝင်ရမယ့်အချက်တွေက နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ ဓာတ်ပုံလိုင်စင်ရောင်စုံ(၃)ပုံ၊ အောင်လက်မှတ်၊ ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက်တွေ ပါရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Accredited Checker လျှောက်ထားတဲ့အခါ လျှောက်လွှာပုံစံနဲ့အတူ ပါဝင်ရမယ့်အချက်တွေက နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ ဓာတ်ပုံ(လိုင်စင်)ရောင်စုံ(၃)ပုံ၊ အောင်လက်မှတ်၊ ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ၊ ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ တင်ပြချက်အပြင် Accredited Checker လျှောက်ထားသူတွေ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီအသိအမှတ်ပြု PE(Structure) ရရှိသူတွေ၊ SEC လုပ်သက် (၅)နှစ်ရှိပြီး Ph.D (Civil) ဘွဲ့ရရှိသူတွေ၊ SEC လုပ်သက် (၅)နှစ်ရှိပြီး M.E (Civil) ဘွဲ့ရရှိသူတွေ၊ SEC လုပ်သက် (၇)နှစ်ရှိပြီး Post Graduate Diploma (Structrure) ဘွဲ့ရရှိသူတွေ၊ SEC လုပ်သက် (၈)နှစ်ရှိပြီး B.E (Civil) ဘွဲ့ရရှိသူတွေ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုင်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာမှာ လျှောက်လွှာနဲ့အတူ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ ဓာတ်ပုံ(လိုင်စင်)ရောင်စုံ(၃)ပုံ၊ အောင်လက်မှတ်၊ ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ၊ ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတင်ပြချက်၊ ပိုင်လိုင်စင်လျှောက်ထားသူတွေမှာ ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ အသိအမှတ်ပြု PE(Structure) ရရှိသူတွေ၊ SEC လုပ်သက်(၅)နှစ်ရှိပြီး Ph.D (Civil) ဘွဲ့ရရှိသူတွေ၊ SEC လုပ်သက် (၅)နှစ်ရှိပြီး M.E (Civil) ဘွဲ့ရရှိသူတွေ၊ SEC လုပ်သက် (၇)နှစ်ရှိပြီး Post Graduate Diploma (Structrure) ဘွဲ့ရရှိသူတွေ၊ SEC လုပ်သက် (၈)နှစ်ရှိပြီး B.E (Civil) ဘွဲ့ရရှိသူတွေ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Soil Test လိုင်စင်
Soil Test လိုင်စင်လျှောက်ရင် သတ်မှတ်လျှောက်လွှာနဲ့အတူ ပါဝင်ရမယ့် အချက်အလက်တွေက နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ ဓာတ်ပုံ(လိုင်စင်)ရောင်စုံ(၃)ပုံ၊ အောင်လက်မှတ်၊ ဘွဲ့ရလက်မှတ်မိတ္တူ၊ ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ တင်ပြချက်၊ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ အသိအမှတ်ပြု PE(Structure) ရရှိသူတွေ၊ SEC လုပ်သက်(၅)နှစ်ရှိပြီး Ph.D (Civil) ဘွဲ့ရရှိသူ၊ SEC လုပ်သက် (၅)နှစ်ရှိပြီး M.E (Civil) ဘွဲ့ရရှိသူတွေ၊ SEC လုပ်သက် (၇)နှစ်ရှိပြီး Post Graduate Diploma (Structrure) ဘွဲ့ရရှိသူတွေ၊ SEC လုပ်သက် (၈)နှစ်ရှိပြီး B.E (Civil) ဘွဲ့ရရှိသူတွေ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆောက်လုပ်ရေး အဆောက်အအုံ လိုင်စင်
​ရွှေပြည်​သာမြို့နယ်​ . ​နေရာ​ကောင်း လုံးချင်း...
(၀.၀၅) ဧက ၊ မြေကွက်ကျယ်
Mini Condo(15' × 55')အမြန်ဌားမည်
လသာ လမ်းသန့်​. 3လွှာ